Octavio Paz. Nhetembo nhanhatu dzekumurangarira pagore rekufa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Octavio Paz. Nhetembo nhatu dzekumurangarira pagore rekufa kwake
Octavio Zuva akafa zuva rakaita sezuva ra 1998 en Coyoacan, Mexico, nyika yokumusha kwake. Imwe yeiyo vadetembi vane mukurumbira uye vanozivikanwa veLatin America, yaive zvakare a munyori mukuru. Vakamupa iyo Mubayiro weNobel muMabhuku en 1990. Mukurangarira kwake ndinopora 6 yenhetembo yebasa rake rakakura uye rakasiyana kwazvo iro rinoumba kuunganidzwa kwakawanda kwenhetembo uye mabhuku ezvinyorwa.
Mukutanga 30s yakaburitsa yake nhetembo dzekutanga mumagazini Kutuka. Uye gare gare anozotungamira zvimwe zvakaita Taller o Mwanakomana akarasika, atova mumakore ekuma40. Achishanya kuSpain, akabata nevakadzidza muRepublican uye na Pablo Neruda, iyo yaive nesimba rakakura pabasa rake. Iri mumakore gumi e makore makumi mapfumbamwe paanoburitsa 4 mazita zvakakosha: Parole, Labyrinth yeKusurukirwa, Gondo kana zuva?uye Uta nembira. Uye pakati pemabhuku ake ezvinyorwa zvakakodzera kusimbisa, kupa mimwe mienzaniso, Quadrivium, Toponemes, Yakapfuura zvakajeka o Murazvo wakapetwa kaviri. En 1981 akagamuchira iyo Cervantes Mubayiro.
Nezve mufaro wakasvibira wedenga
mwenje iwe kupora kuti mwedzi unorasikirwa
nekuti mwenje pachawo unorangarira
mheni uye matsutso mubvudzi rako.
Mhepo inonwa mhepo mumhepo yayo,
fambisa mashizha nemvura yavo yakasvibira
nyorovesa mapfudzi ako, musana wako unoruma
uye rinokusunungura mbatya uye rinopisa uye rinodzoka yelo.
Seiri mbiri dzakapetwa
mazamu ako maviri. Musana wako irukova.
Dumbu rako ibindu rinotya.
Iyo matsutso pamutsipa wako: zuva nemhute.
Pasi pegirini yeguru yekuyaruka
muviri wako unopa rudo rwayo huwandu.
Pakati pekuenda nekugara
Pakati pekusiya nekugara kusahadzika zuva,
murudo nekujeka kwaro.
Iyo yakatenderera masikati yatove bay:
mukufamba kwayo ichiri kufamba pasi rose.
Zvese zvinoonekwa uye zvese hazvinzwisisike,
zvese zviri padyo uye zvese hazvibatike.
Mapepa, bhuku, girazi, penzura
vanozorora mumumvuri wemazita avo.
Beat yenguva inodzokorora mutembere yangu
syllable imwechete yakasindimara yeropa.
Chiedza chinoita kuti madziro asakendenga
yemitambo yemitambo yekufungisisa.
Pakati peziso ndinozviona ini;
Haanditarise, ndinomutarisa mumaziso ake
Iyo pakarepo inoparara. Pasina kufamba,
Ini ndinosara ndoenda: ndiri kumbomira.
Maziso ako ndiwo nyika
yemheni uye kubvaruka,
dutu risina mhepo,
gungwa risina masaisai, shiri dzakasungwa,
zvikara zvendarama zvisingaiti,
topazi yakaipa sechokwadi,
matsutso musango glade
uko mwenje unoimba pabendekete
yemuti uye mashizha ese ishiri,
gungwa mangwanani iwayo
tsvaga maziso akaunganidzwa,
tswanda yemichero yemoto,
kunyepa kunopa chikafu,
magirazi enyika ino,
kudzikama kwekupenga kwegungwa masikati,
kupenya chaiko, renje.
nechaiko changu chakatyoka nepenzura yangu tsvuku
dhonza zita rako
zita remuromo wako
chiratidzo chemakumbo ako
nyora zita remuviri wako
kusvikira chisvo changu
uye dombo rinodanidzira
uye madziro anofema kunge chipfuva
Zvakare neshure kwemumhanzi
kuti kana ichizunguzika inokura uye kutetepa
kusvikira mune mimwe mimhanzi inova mbeveve,
zvitubu kubva pasi pekunyarara
imwe runyararo, shongwe yakapinza, pfumo,
uye inomuka uye inokura uye inotimisa isu
uye kana ichisimuka vanowa
manyepo madiki uye makuru,
uye tinoda kuridza mhere uye pahuro
uko iko kunyarara kuri mbeveve.
Miviri miviri yakatarisana
dzimwe nguva ari mafungu maviri
uye usiku igungwa.
dzimwe nguva ari mabwe maviri
dzimwe nguva midzi
dzimwe nguva mavezi
uye nemheni usiku.
nyeredzi mbiri dzinodonha
Mudenga risina chinhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Octavio Paz. Nhetembo nhatu dzekumurangarira pagore rekufa kwake
Carlo Frabetti naNando López vanohwina iyo SM El Barco de Vapor uye Wide Angle Awards
Vicente Espinel uye yegumi spinel, dzimwe ngano uye zvimwe chokwadi